မြန်မာမီဒီယာတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုက ဘာလဲလို့ မေးချင်တယ် ~ Myanmar Express
From : cybernautical@gmail.com၁ BBC က ရိုဟင်ဂျာကိတ်စ ဖွတယ် မြန်မာမီဒီယာတွေ လက်ရှောင်နေတယ်၂ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ BBC ကို ထိုင်းမှာ ဆန်ဒပြတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်၃ ဦးတင်ဦးက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူးပြောတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်၎ ဦးခင်ရီက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်ဂါလီတွေပါလို့ပြောတယ်Yangon Press International က ကိုသူရမျိုးတစ်ယောက်ပဲ ရေးတယ်ကျန်တဲ့မြန်မာမီဒီယာ ကြီးတွေအားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်၅ လန်ဒန်မှာ မြန်မာတွေ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း ကိုဆန်ဒပြတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်၆ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗျဲကျွန်းမှာ ရခိုင်မလေးတစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် မုဒိမ်းကျင့်အသတ်ခံလိုက်ရတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်၇ ကုလားတွေ အသတ်ခံရတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး ဝိုင်း အော်ကြတယ်ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ နိုင် Groupက မြန်မာ မီဒီယာကြီး တစ်ခုကိုsponsor ပေးနေတယ်ကြားတယ် Myanmar Express
6 June 2012 09:23
That is sure. naing Group is from Muslim Group.Ok.Country is going to deth by muslim, china and foreign.Our burmese should know everything.Get rid DASSK, GET minkonaing Mya Aye, Get rid 88 , NLd all rubbish.
Media tway,al dar kya tot ma thi chin yaung saung nay tal.Lu myo pyot say chin lo lar,sin sar kya par,mother landatweet.
6 June 2012 11:40
မီဒီယာကို ၀ယ်ထားတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ က မီဒီယာတွေကို မြန်မာပြည်သူ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားပြုမီဒီယာတွေ ပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပြည်ပက မီဒီယာတွေ ကို အာရဗ်တွေ က ထောက်ပံ့ထားပြည်တွင်း က မီဒီယာ ပိုင်ရှင်တွေ က မွတ်စလင်တွေ ဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးမီဒီယာ က တိုင်းပြည်အသက်ပါမီဒီယာ ကို မွတ်စလင်မီဒီယာ တွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြောတွေ ဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအင်အားစု တပ်မတော်၊အုပ်ချုပ်ရေး အင်အားစု အစိုးရ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ လ.၀.ကစသည်တို့ မှာ မွတ်စလင်တွေ ၀င်မလာအောင်နဲ့ မီဒီယာ မှာ မွတ်စလင် propaganda မဖြစ်လာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါအင်တာနက်မှာ လည်း မွတ်စလင် propaganda အရမ်းများနေပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာ မွတ်စလင်တွေဟာ မီဒီယာ မှာ ငွေတွေပုံအောပါတယ်ပြီးရင် ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာ မွတ်စလင် propaganda မွတ်စလင်ဝါဒဖြန့် တာတွေလုပ်ပါတယ်အားလုံး သတိထားကြပါ။ အစိုးရအနေနဲ့ မီဒီယာတွေ ကို သေချာ ကိုင်တွယ်ပေးပါမြန်မာပြည်သူ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားပြုမီဒီယာတွေ ၊ Messenger လို Yangon Press International လို မီဒီယာတွေ တစ်စတစ်စ ပိုမိုများလာအောင် အားပေးပါအခုပြည်ပ ကမီဒီယာတွေမှာ ကချင်၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရှမ်း မီဒီယာတွေ၊ ရခိုင်မီဒီယာတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နေတဲ့ မီဒီယာ အသေးလေးတွေ ကလွဲလို့ Irrawaddy, DVB, BBC, Mizzima, Eleven စတဲ့ မီဒီယာလောက ကို အုပ်စိုးထားတဲ့ မီဒီယာကြီးတွေ ဟာ မွတ်စလင်ငွေတွေပုံအောထားတဲ့ မွတ်စလင် Propaganda လွှင့်ပေးနေရတဲ့မွတ်စလင် တွေနဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်း တွေဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ က ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ကန့် ကွက်တာ၊ မြန်မာမလေးကို ၊ မြန်မာရဟန်းကို လည်လှီးပြီးသတ်တာတွေ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို မီးရှို့တာတွေကို သတင်း လုံးဝ (လုံးဝ) အမှောင်ချထားပြီး မွတ်စလင် တွေ အသတ်ခံရတာ င်္သချိုင်းအဖျက်ခံတာမျိုးဆိုရင် တစ်မိနစ် နောက်မကျပဲလွှင့်ပေးနေပါတယ်။facebook ကျေးဇူးနဲ့ ဘလောခ့်တွေ ကြောင့်သာ ဒီသတင်းတွေ ကို ပြည်သူတွေ သိရတာပါ။မဟုတ်ရင် Irrawaddy, DVB, BBC, Mizzima, Eleven စတဲ့ မွတ်စလင် Propaganda လွှင့်ပေးနေရတဲ့ မီဒီယာကြီးတွေ က မြန်မာမလေးကို မွတ်စလင်တွေ မုဒိန်းကျင့်ပြီး လည်လှီးသတ်တဲ့ အကြောင်းကို သတင်း လုံးဝ (လုံးဝ) အမှောင်ချထားလို့ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ကချင်၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင် မီဒီယာ တွေ နဲ့ Irrawaddy, DVB, BBC, Mizzima, Eleven စတဲ့ မီဒီယာလောက ကို လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးထားတဲ့ မီဒီယာကြီးတွေ ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်မီဒီယာကြီးတွေ ဟာ မွတ်စလင် Propaganda လွှင့်ပေးနေရတဲ့မွတ်စလင် တွေနဲ့ မကင်းရာမကင်း ကြောင်း တွေဖြစ်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
6 June 2012 11:43
6 June 2012 11:54
Zaw Thet Htwe , who are you? Are you burmese. How much you understand politic and history, Yakhine case you don't any how say. I am burmese. What happen, rohinger, why you keep quiet. This is burma. Ok. I am burmese. From meikhtila. You, Way pho, CEO all fuck you. No love country. All just rubbish.
မီဒီယာတွေက သင်္ကြန်မှာ ပုလင်းကောက်တဲ့ သူတောင်းစားလောက်တောင် စောက်ဆင့်မရှိဘူး...ကုလားတွေနဲ့ဖင်လိုးဖင်ခံလုပ်နေကြတာ...လူတွေက သွေးရင်းသားရင်းဆို မကြောက်ဘူးလေ...ဒါကြောင့်မို့ အဖေအရင်း(သူတို့အမေကို လုပ်ပြီးသူတို့ကို မွေးတဲ့သူ..အဲဒီမီဒီယာကောင်တွေလာဖတ်ရင်နားရှင်း အောင်) ဖြစ်တဲ့အစိုးရကို မခန့်လေးစားနဲ့ မကြောက်ဘူး..ပထွေး ပြည်ပမီဒီယာနဲ့ မိထွေး ဖာစု ကိုကြောက်တယ်လေ...ဒါမှ ELEVEN. လိုNLD ကထောက်ခံပေးလို့ ရတဲ့ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်ဆုတွေ ရမှာလေ...စောက်ရှက်ပဲ..ဒါတောင် စောက်ရှက်မရှိ ပထမမဏ္ဍိုင် ကိုလိုချင်သေးတယ်..ပထမဓါတ်တိုင်ပဲ လုပ်ပါ ငါမူးလာရင် သေးနဲ့ လာပန်းချင်လို့
http://koaungpaing.com စတုတ္တမဏ္ဍိုင်က နွားတွေကို အပီ အပြင် နှိပ်ကွပ်ထားပါသည်း))))x-
eleven လဲ လီး ဘဲ။ Irrawaddy, DVB, BBC, Mizzima တွေ လဲ လီး ဘဲ။ နိုင် ငံ ကို ရောင်း မ စား ကြ ပါ နဲ့။ ဖင် ခံ ချင် ရင် လိုး မယ့် မြန် မာ တွေ လဲ ရှိ ပါ တယ်။ ကု လား မှ လီး ပါ တယ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ မြန် မာ လီး လဲ ကြီး လဲ ကြီး ရှည် လဲ ရှည်ပါ တယ်။